Maalinta: Ogast 20, 2019
Dukumiintiyada Tandem Paragliding Diiwaan gashan
Fethiye Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, tijaabada tijaabada ah ee loo yaqaan 'tandeml paragling pilot' si loo kordhiyo tayada aqooneed ee xirfadda isla markaana ay xirfaddu sii wadato fulinta shaqada shahaadada heerka heerarka Hay'adaha. Fethiye Ticaret [More ...]
Socdaalka Taariikhda ee Istanbul 'Tram Tron'
Socdaalka Taariikhda ee Istanbul 'Tram Tron'. Istanbul waa magaalo ay ku soo rogtay qaabkii gaadiidku maalinba maalinta ka dambaysa iyada oo degsiimadiisu dejisay taariikhdeeda oo dhan. Laga soo bilaabo dib-u-soo-nooleynta illaa xargaha, laga bilaabo taraamyada faras la fuulo iyo garoonnada baabuurta, gawaarida maanta, kuwa dhulka hoostiisa laga raaco, basaska, basaska [More ...]
Tallaabo Cusub oo Loogu Talagalay Wadooyinka 'Menderes Boulevard Traffic'
Dowladda Hoose ee Rize waxay sii wadaysaa ka shaqeynta xalka cufnaanta taraafikada ee bartamaha magaalada. Gaar ahaan gobolka loo yaqaan Isgoyska Meteler ee bartamaha magaalada, Degmada Rize ayaa ku jirta xallinta taraafikada [More ...]
Kadib ku dhawaaqida sanadka 2019 ee ah “Sanadka Mudnaanta Dadka lugeynaya” ee Wasaaradda Arimaha Gudaha, Dowlada Hoose ee Magaalaweynta Malatya, goorta ay gaadiidku si aad ah ugu xoogan yihiin bartamaha magaalada iyo in la abuuro wacyigelinta dadka lugeynaya ee taraafikada, [More ...]
Sabiha Gokcen Airport waxay jabisay Rikoorkii 2019 ee Bayram
Rikoorkii 2019 ayaa lagu jabiyay Eid al-Adha ee Sabiha Gökçen Airport. Maalin ka hor Iiddii Diyaaradda 10 Sabiha Gök Airporten Airport waxaa adeegsaday 119 kun oo 73 rakaab ah bishii Agoosto [More ...]
Khadadka cusub ee basaska ee ay hirgalin doonto Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli ee 6 gobol gaar ah 23 Agoosto 2019 ayaa la furi doonaa Jimcaha. Marxaladda koowaad, Wadada ugu weyn ee 19 ayaa la dhaqaajin doonaa, halka gaadiidka dadweynaha ee magaalada [More ...]
Jidad Fudud, Gawaarida aaminka ah ee Caasimadda
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa howlaheeda si ay u siiso raaxo wadis aad u raaxo leh oo raaxo leh darawalada caasimada. Dhismaha Wadada, Wadad cusub oo la furayo, Waddo laami ah oo la dhisayo, dhisme xad dhaaf ah [More ...]
Fududeyn weyn ee Gaadiidka illaa Caasimadda
Dhanka kale, martida ka timid bannaanka magaalada dhanka kale waxay martigelinayaan rakaabka magaalooyinka kaladuwan, dalabka cusub ee laga bilaabay caasimada 7'den 70'e wuxuu kahelay calaamado buuxa shacabka. Duqa Magaalada Ankara [More ...]
Kordhinta Amniga Wadooyinka
Dowlada hoose ee Manisa, si loo hubiyo badqabka taraafikada wadada ubaxleyda barafka Spil Mountain, GRP (Cat's Eye), digniinta taraafikada iyo jihada jihada ayaa la fuliyay. Dowladda Hoose ee Manisa, oo ay weheliso batroolka ayaa ka wada gobolka oo dhan waddooyinka [More ...]
350 Car Park ee Jaamacadda Erciyes
Dawladda Hoose ee Magaalada Kayseri, Xarunta Jaamacadda ee jaamacadda Erciyes si looga hortago qulqulka taraafikada iyo dhibaatooyinka baarkinada si loo sameeyo shaqo joogto ah oo guriga dhexdiisa ah ayaa sidoo kale la sameeyaa. Xaaladda guud, Duqa Magaalada Caasimadda. Memduh Büyükkılıç Faallooyinka, Erciyes [More ...]
Komishan ayaa laga aasaasay golaha dhexdiisa dhibaatada ka jirta Çiğli İZBAN
KarşıyakaQaybta hoose ee dhulka qaybta sare ee khadka IZBAN ee Cigli iyo degmada waxaa loo arkaa inay tahay dhibaato ay ku kala go'doomiyeen gudiga kaabayaasha iyo kaabayasha ee golaha degmada. Kaabayaasha degmada Çiğli [More ...]
Gaadiidka, oo ah shirkad laga leeyahay degmada Kocaeli Magaalo-Weyne, ayaa ku dhawaaqday inay qaadday dhowr tillaabo oo looga soo horjeedo xoojinta laga yaabo inay la kulanto Ciidul Adxaa ka hor. GaadiidkaPark, oo qaada howlgalka Kocaeli Intercity Bus Terminal, wax dhibaato ah kuma qabin tallaabooyinka la qaaday. [More ...]
RayHaber 20.08.2019 Warbixinta Shirka
Bixinta Agabka Adeegga Fidinta Tareenka waxaa lagu iibsan doonaa Nidaamka CCTV Nidaamka Cusboonaysiinta Adeegga Waddooyinka Saldhigga ayaa loo qaadan doonaa
Jadwalka Tareenka Adapazari iyo Wagons
Tirada waligeed is beddaleysa ee joogsiyada iyo joogsiyada waxay dadka u horseedeen heer fallaago. Akhriste la yiraahdo Özgür Kocaeli's Göksel Genç wuxuu weydiiyay bal in tirada tareenka iyo wadiiqada Adapazarı ay kordhayaan ka hor inta jaamacadaha la furin. Adeegga tareenka [More ...]